I-Brazing Copper Tubing kunye neNkqubo yeBrazil ye-Induction
Ikhaya / izicelo / Ukukhangela ibhola / Ukubhabha ityhubhu yeCopper ngoKwenziwa
I-Brazing Copper Tubing kunye ne-Induction
Udidi: Ukukhangela ibhola tags: ubhedu obhedu, ukubheja umbhobho wethusi, ityhubhu yobhedu yobhedu, ityhubhu yokuhombisa, uthenge isifudumezi sobhedu, Thenga i-heater brazing heater, thenga iRF brazer yobhedu, ukumiliselwa kwebhentshi yobhedu, ipayipi yokubhaka, Imibhobho yobhedu yoqheliso, ukumiswa kwebhubhu yokubulala, induction ubhedu ixabiso brazer
Ukubonisa ukumiliselwa kwebhentshi yobhedu kunye nexesha lokubhrasha usebenzisa inkqubo ye-DW-UHF-10 kW kunye nekhoyili yelebhu yokuqhekeka ekhoyo
Umatshini wokufakisha womatshini we-DW-UHF-10KW
• Ityhubhu yecopper - ityhubhu yeSuction
• Cola incasa
Amandla: 10 kW
Ubushushu: Malunga ne-1500 ° F (815 ° C)
Ixesha: 5 - 5.2 sec
Njengendibano enye eyayinikezelwe kuvavanyo, samisela umthwalo wokuhlola kusetyenziswa udonga olunzima 5/16 ”ishubhu yobhedu eyasungulwa njengenye ityhubhu eyamkela enye kwisiphelo esivulekileyo seflange. Ixesha lokushisa kwakuqikelelwa ngokusebenzisa ipeyinti ye-tempilaque ukubonisa ubushushu. Indibano yovavanyo, (elandelwa zizinto ezinikezelweyo) yayihlangana kunye nencakuba ye-505 i-alloy braze yaze yayibekwa kwileyile yovavanyo kwiifoto eziqhotyoshelweyo) Umjikelo wobushushu wemizuzwana emi-5 ukuya ku-5.2 wafunyanwa ukuba uqukuqele phakathi kwaye wenze indibaniselwano. .
Iziphumo / IiNzuzo:
Njengoko kubonisiwe, imodeli ye-DW-UHF Inkqubo yokugqogqa Iyakwazi ukufudumeza zombini eyona ityhubhu inkulu kunye nencinci ukuya kwicandelo leetyhubhu ukugqibezela ngokudibeneyo. Amaxesha okufudumeza usebenzisa ikhoyili yovavanyo ekhoyo ngaphakathi kwexesha lokulindelwa kwemveliso elindelweyo yi-Electrolux.
I-HLQ iya kufuna indibano epheleleyo yovavanyo ukuze kuphuculwe uyilo lokugqibela lwekhoyili olunokuhlalisa onke amalungu ali-12 aboniswe kwifoto yoyilo. Kuyimfuneko ukwazi nokubona ukucoceka phakathi kokudityaniswa kwetyhubhu ekufuneka ibrashed kunye necandelo lecompressor yentsimbi ukuqinisekisa ukuba indlu yesinyithi ayichaphazeleki yintsimi yeRF eyenziweyo kwikhoyili yomthwalo. Olu luyilo lokugqibela lunokufuna ukongezwa kwezinto ze-ferrite kwikhoyili eya kuthi isebenze ukugxila kumhlaba we-RF kwizikhokelo zobhedu hayi kwizindlu zentsimbi.
Uvavanyo lokuqala lwalugqityiwe kwi-DW-UHF-10kW kusetyenziswa ikhoyili yelebhu ekhoyo. Ikhoyili yemveliso iya kugcinwa kwindlu engenaziphene eya kuthi ivumele umqhubi ukuba ayisebenzise ukufumana ikhoyili ngokuchasene nezikhokelo zobhedu kwindawo echanekileyo nefanelekileyo yokufudumeza inkqubo yenkqubo yokubamba. Uyilo lwekhoyili yemveliso luza kubandakanya isikhokelo esifutshane kunekhoyili yovavanyo kwaye luqwalaselwe ukuze imijikelezo yobushushu iphuculwe (amaxesha amafutshane obushushu).
Umatshini wokufakisha wokuhambisa ngesandla ophathwayo
Inkqubo yokuthengisa izinto ezenziwe ngentsimbi kunye nobhedu
Ukukhupha i-Brazing Copper Billets